Ny Galaxy S21 dia azo vohaina amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo | Androidsis
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny Galaxy S21, terminal izay hatsangana amin'ny volana Janoary amin'ny taona ho avy, dia hampidirina amin'ny alàlan'ny Bixby, a rafitra mamoha vaovao ahafahana miditra amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo, raha ny tsiliantsofina farany mifandraika amin'ity terminal ity ary avy any Korea izy ireo.
Araka io tsaho io, ireo telefaona telo handrafitra ny faritry Galaxy S21 dia hampiditra fomba iray fanamarinana biometrika amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo, ity dia iray amin'ireo zava-baovao lehibe izay ho tonga miaraka amin'ity andiany Galaxy S ity, satria amin'ny lafiny famolavolana, ny zava-drehetra dia manondro fa hitovy io.
Fitaovana io dia ho tonga miaraka amin'ny sosona fanaingoana One UI 3.1, fiasa izay hahatratra ny sisa amin'ireo maodely avo lenta natombok'i Samsung tamin'ity taona ity, toy ny Galaxy S20 sy ny Galaxy Note 20, ho fanampin'ny Galaxy Z Flip sy Galaxy Z Fold 2, saingy haharitra volana vitsivitsy ho avy.
Toy ny rafitry ny fanekena ny tarehy izay azo hadalana amin'ny sarin'ny tompony, mety misy koa ny rafitra mamoha feo mora adalana amin'ny fandraisam-peo, raha tsy hoe tsy maintsy mampiasa andian-teny hafa isika isaky ny fotoana. Tsy dia ahazoana aina kokoa noho ny fampiasana ny rantsantanantsika na ny tarehintsika, indrindra rehefa vao nifoha isika na ao anaty tontolo iray izay tokony hangina.
Na izany aza, tsy maintsy manao izany isika miandry ny volana janoary 2021 hijerena raha mampihatra ilay rafitra mamoha vaovao i Samsung amin'ny farany, rafitra mamoha izay hiaraka amin'ny sensor sy ny fanekena ny tarehin-tànana izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny elanelana Galaxy S, Note ary Z Fold ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny Galaxy S21 dia afaka mamoha amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo
Redmi Note 9, Redmi Note 9 5G ary Redmi Note 9 Pro 5G dia ofisialy